Tsvangirai says he'd accept Zimbabwe PM post - USATODAY.com
World War casualties Tsvangirai says he'd accept Zimbabwe PM post
Zimbabwean opposition leader Morgan Tsvangirai, center, arrives at the opening ceremony of the 28th summit of SADC heads of state and government in Sandton, South Africa.
JOHANNESBURG, South Africa (AP)  Zimbabwe's opposition chief would accept the prime minister's post and concede the presidency — and command of the military — to Robert Mugabe to settle a political crisis in his country, the Associated Press learned Saturday.
Elphas Mukonoweshuro, Tsvangirai's foreign policy adviser, acknowledged in an interview Saturday there was "a possibility of abuse," but said regional leaders who were expected to endorse a deal could keep a check on Mugabe.
"This whole process is about sharing power," Mukonoweshuro said, adding, "Mr. Mugabe will be head of state and Mr. Tsvangirai will be head of government with executive power."
Tensions over Zimbabwe come at a time when southern Africa is struggling to unify to fight poverty. SADC is to launch a free trade agreement Sunday scrapping tariffs on 85% of goods traded among member nations.